Mụta ịde blọgụ ọkachamara - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
Mụta ịde blọgụ ọkachamara WordPress, SEO, Make Money Blogging, Mgbakwunye Ahịa
Mgbakwunye ahịa bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na -eme nke ọma na ụwa ịntanetị. Ndị mmadụ na -achọ ọtụtụ ihe, ntuziaka na -enye aka na ịntanetị kwa nkeji ọ bụla. Ọchịchọ a abụghị n'ime puku mana na nde. Na nloghachi, they visit a website to have a solution […]
Ọfọn, these days no matter whether you are a small company or a big multinational company each one needs a website. The reason is that there are millions of people who use the internet Daily. And it becomes a great way to promote your business with the […]
Otu esi emepụta webụsaịtị blọgụ gị
Ịmepụta weebụsaịtị blog dị mfe. Ịde blọgụ bụ otu ụdị weebụsaịtị nke na -elekwasị anya na ide ọdịnaya. Ozi bara uru karịa nke ị na -enye ndị ọrụ, ha na -alaghachi na webụsaịtị gị ka ha gụọ akụkọ ndị ahụ. Na asụsụ izugbe, we have seen […]
N'etiti ọtụtụ narị mmemme mmemme, mmemme Mgbakwunye nke Amazon bụ otu n'ime usoro ama ama na nke a na -ejikarị maka ịkpata ego na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ. Ọ bara uru isonye na mmemme mgbakwunye Amazon. Mgbakwunye ahịa site na amazon ka bụ ụzọ kachasị mma iji nweta ego n'ịntanetị. […]
Nwere ike iji mgbakwunye mgbakwunye yana AdSense ọnụ na blọgụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji melite monetize gị blog. Na-erite uru na nke abụọ, getting a commission by promoting your own or other people’s product as well as earn […]